प्रावि अस्थायी शिक्षकको थप जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक, सिफारिस हुनेको नामसहित
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले गत असार ३० गते लिएको कार्यरत अस्थायी शिक्षक प्रा वि तह परीक्षा अन्र्तगत अन्तर्वार्ताको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रम शुरु गरेको छ । पहिलो दिन बझाङ, बैतडी,..
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम् रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नका लागि शुक्रबारदेखि बेरोजगार सूचीकरण गदै‌छ। सात सय ५३ स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्रमा खटिइएका रोजगार संयोजकले बेरोजगार..
२० हजार सरकारी जागिर खुलाउने सामान्य प्रशासनमन्त्री पन्डितको घोषणा
जनकपुर । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पन्डितले सरकारी कर्मचारीको अभाव पुरा गर्न १५ देखि २० हजार कर्मचारी भर्नाको तयारी सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । कर्मचारी भर्नाको लागि लोकसेवा आयोगले चाडै आवेदन..
काठमाडौँ।सरकारले रिक्त रहेको २६८ रोजगार संयोजकको पदपूर्ति गर्न पुनःआवेदन माग गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले एक सूचना जारी गरी यही फागुन ३० देखि..
प्रावि तहको अस्थायी शिक्षक थप ८ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक, स्थायीमा सिफारिस हुनेको नामसहित
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले राजपत्र अतंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरहको पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । आयोगले खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नेगरी दरखास्त आह्वान..
काठमाडौँ । ईपीएस भाषा परीक्षाका लागि चैत ८ गतेदेखि आवेदन खुल्ला हुने भएको छ। सन् २०१९ का लागि कोरियाले नेपाली श्रमिकको कोटा निर्धारण गरेर पठाएपछि भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिने..
प्रा.वि तहको अस्थायी शिक्षक अन्तर्वार्ताको नतिजा सार्वजनिक, स्थायीमा सिफारिस हुनेको नामसहित
कतार एयरवेजमा १६२ जना नेपालीलार्इ रोजगारी अवसर, तलब १ लाख ३० हजारसम्म
काठमाडौ । कतार एयरवेजले नेपालबाट १ सय ६२ जना कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ । विभिन्न दश पदमा १६२ जना कर्मचारीका लागि नेपाली नागरिकहरुबाट निबेदन आहवान गरेको छ । स्टेवार्डमा ३०..
कोरियाले तोक्यो १० हजार ५० जनाको कोटा, कति रकम तिर्नुपर्छ कोरिया जाँदा ?
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले सन् २०१९ मा लिने ईपीएस भाषा परीक्षाका लागि नेपाली कामदारको कोटा तोकेको छ। कोरियाले १६ देशमध्ये सबैभन्दा बढि नेपाली कामदार लैजाने भएको हो।आगामि मंगलबार सूचना जारी..
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार नागरिकलाई न्यूनतम रोजगार दिनका लागि निवेदन माग गरेको छ। पहिलोपटकको हकमा चैत महिनासम्म निवेदन दिने समयसीमा तोकिएको छ। बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय..
अस्थायी शिक्षक अन्तर्वार्ताको नतिजा सार्वजनिक, स्थायीमा सिफारिस हुनेको नामसहित
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले गत असारमा लिएको कार्यरत अस्थायी शिक्षक परीक्षा अन्र्तगत अन्तर्वार्ताको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रम शुरु गरेको छ । पहिलो दिन बिहीबार निम्न माध्यमिक तह अन्र्तगत सबै क्षेत्रको..
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको नतिजा प्रकाशित
काठमाडौं । सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले विभिन्न पदका लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । विश्वविद्यालयले सहायक प्रशासक (प्रशासन), सहायक प्रशासक (लेखा), ल्याब असिस्टेन्ट र असिस्टेन्ट पदमा विज्ञापन गरेको थियो । नतिजा..
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नतिजा सार्वजनिक (नामावलीसहित)
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न पदका लागि खुलाएको भर्ना अनुसार लिखित र अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । नतिजा हेर्नुहोस्ः ..
तीन हजार २९७ सशस्त्र प्रहरी जवानका लागि जागिर खुल्यो (सूचनासहित)
काठमाडौँ। सशस्त्र प्रहरीले एकैपटक तीन हजार २९७ जना जवानको नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सशस्त्रले शुक्रवार सूचना प्रकाशित गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको छ। खुला तथा समावेशी रूपमा पदपूर्ति हुनेछ। पदपूर्तिको..
‘राम्रा’ भनिएका पर्यटकीय होटलको असली कर्म यस्तो पाइयो
चितवन । जिल्लाका ‘राम्रा’ भनिएका पर्यटकीय होटलमा गुणस्तरहीन सामान प्रयोग भएको र भान्सा फोहर रहेको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले..
मानुषी र डिप्रोक्स लघुवित्तले मागे कर्मचारी, एसएलसी उत्तिर्णले आवेदन गर्न सक्ने
काठमाडौं। मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था र डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्मचारी माग गरेका छन्। डिप्रोक्सले ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा भएका तथा स्नातक पास गरेकाहरुका लागि प्रशिक्षार्थी माग गरेको छ। स्नातक गरी..
अब यी १८ निकायका सरकारी कर्मचारीले फेरि पाउछन अतिरिक्त भत्ता
काठमाडौं । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने गत वर्षको आफ्नै निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको नाम परिवर्तन गरेर १८ कार्यालयका..
एनआइसी एशिया बैंकले माग्यो ३ पत्रकारसहित ५३ जना कर्मचारी
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ३ पत्रकार (कन्टेन्ट राइटर) र ५० चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका लागि जागिर खुलाएको छ । इच्छुकले आगामी चैत ६ गतेसम्ममा आवेदन दिइसक्नुपर्ने छ । कन्टेन्ट राइटरमा जागिर खानका..
प्राइम कमिर्सियल बैंकले ठुलो संख्यामा कर्मचारी माग्यो
काठमाडौं । राष्ट्रबैंकबाट क बर्गको मान्यता प्राप्त प्राइम कमर्सियल बैंकले विभिन्न ९ पदमा कर्मचारी मागेको छ । बैंकले रिस्क मेनेजमेन्ट, ब्रान्च मेनेजर, अफिसर लेभल, चार्टड एकाउन्टेन्ट, सुपरभाइजर, आईटी सहयोगीलगायतका पदमा कर्मचारी..
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहायक द्धितिय तहको नतिजा प्रकाशन, यि हुन सफल उमेद्वारहरु (नामावली सहित)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्धितिय तहको पहिलो चरणको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको छ । लोकसेवा आयोगले लिएको परिक्षामा ६८ जना माग गरिएकोमा लिखित परिक्षाको पहिला चरणमा कुल..
भक्तपुर रुटमा चल्छ यस्तो बस, फोहोर राख्न डस्टविन, खानेकुरा किन्न पनि पाइने
काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बसमा तपाईँको यात्रा कस्तो हुन्छ रु खचाखच ठेलामठेल हुने गरी सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु, यात्रु भित्र ठेल्दै अनि ओराल्दै गर्ने सहचालक, सहचालकलाई धेरै यात्रु बोलाउन हौस्याउने..
ट्रेकिङ गाइडको ज्याला २० प्रतिशतले बढ्यो, अब कति पुग्यो ?
काठमाडौं । ट्रेकिङ गाइडको ज्याला २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मंगलबार सूचना सार्वजनिक ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले माघ १८ गतेदेखि लागु हुने गरी पदयात्रामा काम गर्ने..
नेपाल प्रहरीमा १ हजार ५ सय ५६ जनालाई जागिर खुल्यो, ८ कक्षा पासले पनि आवेदन दिन सकिने (सूचनासहित)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदमा दर्खास्त आह्वान गरेको छ । प्रहरीमा प्राविधिक समूहमा एक हजार पाँच सय ५६ जनालाई जागिर खुलेको हो । एमएस सर्जरीदेखि फिङ्गर प्रिन्टरसम्मका पदमा प्रहरीले..
रोजगार संयोजकको नतिजा प्रकाशित, क–कस्को नाम निस्कियो ? नतिजासहित
काठमाडौं । देशबाट गरीबी घटाउने र अन्ततः हटाउने रणनीतिका साथ सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अन्तिम नतिजा सोमबार प्रकाशित भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार रोजगार संयोजकको..
कृषि विश्वविद्यालयमा १ सय जनालाई जागिरको अवसर (विज्ञापनसहित)
काठमाडौं । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले अधिकृतदेखि सहायक तहका विभिन्न पदमा १ सय कर्मचारी माग गरेको छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयले रिक्त पदहरुको स्थायी पूर्तिका लागि आइतबार खुला विज्ञापन..
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले विभिन्न पदका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरुेको छ । बिहीबार निगमले निकालेको सूचनाअनुसार सिनियर क्याप्टेनदेखि पेन्टरसम्मका पदमा कर्मचारी माग गरेको हो । इच्छुक र योग्यता पुगेका..
कालु पाँडेको समाधिस्थलबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘गोरखा’ कता पर्छ’ ?
काठमाडौँ । चन्द्रागिरि–१ दहचोकस्थित काजी कालु पाँडेको समाधीस्थलमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दा निकै गम्भीर देखिनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तेस्रो इन्द्रदह पर्यटन उत्सवको उद्घाटनका क्रममा भने हर्षित थिए । उत्सवको उद्घाटनका लागि..
काठमाडौं । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्मचारीको माग गरेको छ । संस्थाले विभिन्न तीन पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिले तोकिएको समय र ठेगानामा..
Results 845: You are at page7of 29